kwan dai thet thi: ဆရာကြီးပါမောက္ခ ဒေါက်တာအေးကျော် မိန့်ခွန်း
Lagt inn av kwan Dai Thet Thi kl. 11:00
Zan Zan sa...
ဂရုတစ်စိုက်ဖတ်လို့ မှတ်လားခပါရေ။ တင်ပြပြီးထားရေ အတွက်ကျေးဇူးပါ။
28. august 2009 kl. 06:52